Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Carnival Corp. Ugbu a iziga Jamaica 110
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Onye minista njem nlegharị anya Edmund Bartlett (L) na onye isi oche nke Carnival Corporation, ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa, Arnold Donald na -ekerịta oge ọkụ site na nzukọ ha na Miami, Florida na Tuesday, Septemba 28, 2021.
Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, kpughere na Carnival Corporation, ahịrị ụgbọ mmiri kacha ukwuu n'ụwa, agba mbọ iziga ụgbọ mmiri 110 ma ọ bụ karịa, site n'ụdị ya dị iche iche, n'agwaetiti ahụ n'etiti Ọktoba 2021 na Eprel 2022. Nkwekọrịta a dabere na ndị ọchịchị Jamaica na Carnival na -aga n'ihu na -arụkọ ọrụ nke ọma na lọjistik na okwu ahụike ọha.
Carnival bụ onye mmekọ dị mkpa maka njem nlegharị anya Jamaica na mgbake akụ na ụba.
Okporo ụzọ na -eguzogide nke Jamaica na -enye ebe nchekwa maka ndị ọbịa, ndị ọrụ njem na ndị mmadụ.
Nzukọ a na Carnival bụ akụkụ nke usoro njikọ aka na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ njem na ahịa isi iyi Jamaica, United States na Canada, gụnyere ndị isi ụgbọ elu na ndị na -etinye ego.
Arnold Donald, onye isi ụlọ ọrụ Carnival Corporation kwupụtara nke a, n'oge nzukọ na Tuesday, Septemba 28, 2021, ya na Minista Bartlett, ndị ọrụ njem nlegharị anya mpaghara, yana ndị isi ụlọ ọrụ Carnival ndị ọzọ.
"Carnival bụ onye mmekọ dị oke mkpa maka Njem nleta Jamaica na mgbake akụ na ụba ka ukwuu. Anyị na -ahụ nnabata nnabata nke ụgbọ mmiri na -amata na Resilient Corridors nke Jamaica na -enye ndị ọbịa anyị, ndị ọrụ nlegharị anya, na ọnụ ọgụgụ mmadụ nchekwa, "Minista Bartlett kwuru.
Nkwuputa a na-abịa n'agbanyeghị na-ebelata ngwa ngwa njem ụwa zuru ụwa ọnụ sitere na mgbasa nke ụdị Delta nke COVID-19 na nsogbu ndị metụtara ya.
Mịnịsta na -ahụ maka njem, Hon. Edmund Bartlett (4th L) na Onye isi oche nke Carnival Corporation, ụlọ ọrụ Cruise kacha ukwuu n'ụwa, Arnold Donald (nke anọ sitere na R) na -ese foto ngwa ngwa ka ha gachara nzukọ na Miami, Florida iji kpaa nkata nnukwu njem ha na Jamaica. Isonyere ha sitere na L - R bụ Director nke Njem Nleta, Donovan White; Onye isi oche nke JTB, John Lynch; Carnival Corporation osote onye isi oche nke Ọdụ ụgbọ mmiri Global na Mmekọrịta Ọchịchị Caribbean, Marie McKenzie; Delano Seiveright; Onye isi ndị ọrụ Carnival Corporation, Josh Weinstein na JTB osote onye isi America, Donnie Dawson.
Nzukọ a na Carnival bụ akụkụ nke usoro njikọ aka na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ njem na ahịa isi iyi Jamaica, United States na Canada, gụnyere ndị isi ụgbọ elu na ndị na -etinye ego. A na -eme nke a iji gbaa ọtụtụ ndị mmadụ ume ka ha gaa ebe ha na -aga n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ, yana iji kwalite itinyekwu ego na ụlọ ọrụ njem njem mpaghara.
Bartlett sonyeere onye isi oche nke Jamaica Tourist Board (JTB), John Lynch; Onyeisi njem nlegharị anya, Donovan White; Senior Strategist na Ministry of Tourism, Delano Seiveright na osote onye isi njem nlegharị anya maka America, Donnie Dawson.
Akụkụ ụgbọ mmiri bụ otu n'ime ọrịa COVID-19 kacha njọ, nke mere ka ọ mechie ihe karịrị otu afọ. Agbanyeghị, ngalaba ahụ ejirila nwayọọ nwayọọ maliteghachi ọrụ n'ọtụtụ ebe, gụnyere Jamaica, maka usoro ahụike na nchekwa siri ike, dịka ndị njem na ndị ọrụ ọgwụ mgbochi.
“Site na nloghachi nke ndị mbata na-abata ọnụnọ kemgbe June 2020, anyị anọwo na-ahụ uto na-aga n'ihu n'ihu ọkwa COVID-19 ma ugbu a nrughari alaghachila, anyị na -atụ anya uto dị ukwuu na ọnụọgụ anyị. Edebela ihe niile achọrọ iji zute ma United States na usoro COVID-19 nke Jamaica na mgbakwunye na ndị njem nwere oke ịkwaga n'ime Resilient Corridors, "Minista Bartlett kwuru.
“Ekwesịrị m ime ka ọ pụta ìhè na ụgbọ mmiri ahụ ga-emerịrị usoro siri ike na-achịkwa ịmalitegharị ụgbọ mmiri, na-achọ ka ndị njem gafere afọ 12 na ndị ọrụ ụgbọ mmiri gbaa ọgwụ mgbochi yana ka ndị njem niile nye ihe akaebe nke nsonaazụ na-adịghị mma sitere na nnwale COVID-19 emere n'ime. Oge awa 72 nke ịkwọ ụgbọ mmiri. N'ihe banyere ndị njem na -anaghị agba ọgwụ mgbochi ọrịa, dị ka ụmụaka, a na -enye iwu nyocha PCR, a na -enyochakwa ndị njem niile ma nwalee (antigen) na ntinye, "Minista Bartlett kwusiri ike.